Yoo xinnaatte teessoo dirree kuusdeetaa tokko galmee barruu tokko keessatti saagi. Gaafii akka xalaayyan unka maxxansuu barbaadduuf "Ya" deebiisi.
Yamuu maxxansuu, odeeffannoon kuusadeetaa, dirreewwan kuusadeetaa walsimaaniin bakka buusa (iddooqoota). Dirreewwan kuusadeetaa saaguuf odeeffannoo itti dabaalataaf, caancala Kuusa Deetaa jala fuulaa, Saagi - Dirree - Kabirroo wabeefadhu.
Unka xalayoota kee gara maxxansaatti yk faayilii irratti olkaa'amuu sanii murteesaa.Xalayyaan tokkoon kuusaf maxxansama.
Kuusaawwan mara kuusadeetaa irraa hojeeta.
Kuusaawwan malata'ee qofa kuusadeetaa irraa hojeeta. Dirqala kun kan jiraachu danda'uu yoo duraan kuusadeetaa keessatti qaabarreess barbaachisuu mallatteesite qofa.
Unka xalayoota kee gara maxxansaatti yk faayilii irratti olkaa'amuu sanii murteesaa.
Unka xalayoota maxxansa.
Unka xalayoota faayiloota keessatti olkaa'a.
Unka xalayoota kuusuuf xurree ifteessa.
Qaaqa Xurree Filadhu bana.
Title is: Makiinsa Ergannoo